के भएको हो प्रचण्डलाई ? सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी « Sansar News
के भएको हो प्रचण्डलाई ? सचिवालयले दियो यस्तो जानकारी
२५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १७:१४
२५ फागुन, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही दिनयता विरामी परेका छन् । रुघाखोकी र ज्वरो आएपछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा निस्किएका छैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएकै दिनदेखि अस्पताल पुगेयता प्रचण्ड घर बाहिर निस्किएका छैनन् ।
ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात गत मंगलबार शिक्षण अस्पताल पुगेका प्रचण्ड त्यसयता कतै ननिस्किएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । प्रचण्ड ओलीलाई भेट्न अस्पतालमा आउँदा पनि सामान्य रुघाखोकी लागेको देखिएको अ‍ोलीको सचिवालयका सदस्यहरुले बताए । त्यसको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणपछि अधिकांश नेताहरु अस्पताल गए पनि प्रचण्ड भने घरमै आराम गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय प्रचण्डले भेटघाट पनि बन्द गरेका छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नेकपाले प्रदेश भेला लगायत पार्टीका सबै कार्यक्रमहरु स्थगित गरेकाले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जानु नपरेकाले उनी आराम गरिरहेकोसतिचवालयले जानकारी दिएको छ ।